उद्योगले बस्तीमा ‘विष’ फालिदिन्छ, हामी कसरी बाँच्नु?
खबर / विशेष / एक्सप्लेनर
मिलन बुढाथाेकी विराटनगर - बुधबार, कात्तिक २६, २०७७
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका-१३ स्थित थान टोलका रामकुमार सरदारको परिवार पुस्तौंदेखिको हो। उनको जस्तै ५५ घरपरिवार टोलमा मिलेर बस्दै आएका छन्।
नजिकै रहेको खनार बजार र आसपासमा जागिर अनि मजदुरी गर्दै आएको यो सिङ्गो गाउँलाई एउटा व्रजपात भयो, जब बस्तीबीचमा एउटा उद्योग खडा भयो।
यो बस्तीको बीचमा ‘अरिहन्त कोरिगेसन’ उद्योग छ। उसले कागज तथा धातुका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्छ।
उद्योग खोल्ने बारेमा बस्तीका कसैलाई पनि केही थाहा छैन।
स्थानीयसँग सरसल्लाह नै नगरी उद्योग कसरी खोलियो?
बस्तीबीचमा यस्तो उद्योग खोल्न कसले अनुमति दियो?
प्रश्न सोध्न रामकुमार सरदारहरू धेरैपटक सरकारी निकायमा गइसकेका छन् तर, जवाफ केही छैन। सबैले आलटाले जवाफ दिन्छन्।
उद्योगले के गर्‍याे?
यो उद्योगले विषाक्त ग्यास फ्याँक्छ। उद्योगबाट निस्किने पानीसमेत विषाक्त छ। त्यसले मानिस तथा पशुपंक्षीलाई समेत रोगी बनाइरहेको छ। याे उद्याेग २०७६ साउनमा स्थापना भएकाे हाे।
‘वर्षौंदेखि यही खेतमा धान फलाएर परिवार पाल्दै आएको छु,’ उद्योगसँगै टाँसिएको आफ्नो जमिन देखाउँदै सरदारले भने, ‘उद्योगले निर्मलीकरण नगरी पानी निकास गरिदिँदा जेसुकै खेती लगाए पनि आगो लगाएजस्तो हुन्छ।’
उनका अनुसार उद्योगबाट निस्किने ग्यासले सासै फेर्न मुस्किल पार्छ। गन्ध पनि सहिनसक्नु छ।
स्थानीय युवा कौशल निरौलाका अनुसार उद्योगबाट हरेक दिन मध्यरातमा सहनै नसक्ने विषाक्त ग्यास बाहिर आउँछ।
ग्यासका कारण स्थानीय रातभरि सुत्नै सक्दैनन्।
उनीहरूलाई झाडापाखाला, आँखा रातो हुने, टाउको दुख्ने, खाना अरुची हुने, छाला निरन्तर चिलाउने र फोका आउने जस्ता समस्या देखिएका छन्।
बस्तीका वृद्ध, बालबालिका, बिरामी र सुत्केरी तथा गर्भवतीमा पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन्। कतिले बस्ती छोडिसकेका छन्।
‘उद्योगबाट ग्यास निस्किएका बेला यो बस्तीका कसैले एकपटक त सासै फेर्न सक्दैनन्,’ निरौलाले भने, ‘हाम्रो समस्याबारे वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र नगरपालिकासम्म पुग्यौं। तर, अहिलेसम्म कसैले केही सुन्दैनन्।’
यो उद्योगबाट थानटोलका ५५ घरमा बसोबास गर्ने करिब ४ सय व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। नजिकका अरू बस्तीसमेत प्रभावित भएको स्थानीय महावती चौधरी बताउँछिन्।
उनले वर्षौंदेखि खेतीपातीमा लागेका स्थानीयले उद्योगछेउको जमिनमा उब्जनी नै हुन छाडेपछि बाँझै छाड्ने गरेको बताइन्।
उनका अनुसार उद्योगले कागज तथा धातुका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। उद्योगबाट बाहिरिने पानीलाई निर्मलीकरण नगरी त्यसै खेतमा छाडिदिने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
जसका कारण उक्त पानी खाएर गाउँका चौपाया पनि मरेको छिमेकी मथ्नी चौधरी बताउँछिन्।
मजदुर झन् प्रभावित
उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश मजदुर भारतीय छन्। उद्योगमा काम गर्ने सोही टोलका केही मजदुरमा समेत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखापर्दा समेत उद्योगले बेवास्ता गर्ने गरेको उद्योगमा कार्यरत मजदुर श्याम पोदारले जानकारी दिए।
‘जुन बेला ग्यास निष्कासन हुन्छ, त्यो बेला उद्योगमा काम गर्ने कति मजदुर त बेहोसै हुन्छन्। त्यस्तो बेला उद्योगको ठूला पदका कर्मचारी भनेका उद्योग बाहिर जान्छन्,’ उनले भने, ‘हामी दैनिक ५ सय लिएर काम गर्ने मजदुरलाई त्यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बिनासुरक्षा सामग्री पठाउने गरेका छन्। काम नगरे चर्को दबाब दिन्छन्। हटेर जा भन्छन्।’
दैनिक ज्यालादारीमा जोखिमपूर्ण काममा लगाए पनि उद्योगले कामदारको स्वास्थ्यमा पटक्कै ख्याल नगरेको पोदारको गुनासाे छ।
स्थानीय सरकार नै मौन
सामान्य स्वास्थ्य र पर्यावरणीय मापदण्डबिना सञ्चालनमा रहेको उक्त उद्योगको मनोमानीबारे तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिको मौनतालाई पीडित स्थानीयवासीले आश्चर्यजनक मानेका छन्।
‘उद्योगको असरका बारेमा हामी पुग्न बाँकी ठाउँ कतै छैन। तर, सबैतिरबाट हुन्छ भन्ने जवाफ त आउँछ,’ स्थानीय योगेन्द्रबहादुर खत्रीले भने, ‘निमुखालाई परेको असरबारे तीनै तहका सरकारले बेवास्ता गर्छन्, किन यस्तो बेमतलब हो, हामी त छक्क परेका छौं।’
पटकपटक छलफलका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
उद्योगका प्रतिनिधिले पहिले समस्या भए पनि अहिले कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका छन्।
‘उद्योगमा केही समस्या थियो, तर अहिले त्यसको पूर्णसमाधान भइसकेको छ,’ उद्योगका मानवसंशाधन प्रमुख कपिल रेग्मीले आयोमेलसँग भने।
उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) नै गरेको छैन।
स्थानीयसँग छलफल पनि गरेन।
‘पहिले जुन शान्तिपूर्ण हिसाबमा बसिरहेका थियौं, त्यसैगरी बस्न पाउँ भन्नेमात्र न हो, हाम्रो माग,’ स्थानीय गीता पोदारले भनिन्, ‘बस्तीमा विष ल्याएर छाडिदिँदा कसको चित्त बुझ्छ र?’
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २६, २०७७